प्रधानमन्त्री ओलीले डा. केसीका मागहरु सम्वोधन गर्ने भए यस्तो बन्दै छ रणनीति ! - Prahar News
काठमाडौं - डा.गोविन्द केसी अनसन बसेको २३ दिनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चासो दिएका छन् । डा. केसीका मागहरु सम्वोधन गर्न सरकारले वार्ता सुरु गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् ।
अरु विषयमा सामान्य कुरा मात्रै भयो।तर बैठक लगभग डा.केसीबारे नै केन्द्रित हुन पुग्यो एक सचिवालय सदस्यले अनलाइनबरसँग भने । प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले गर्नुपर्ने पहल गरिरहेको जवाफ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा भने शिक्षा सचिवलाई कुरा गर्न पठाएको छु उहाँले पनि धेरै जिद्दी गर्नुभएन ।
अपरान्ह बसेको सचिवालय बैठकमा नेताहरुले डा. केसीबारे चासो राखेका थिए । बैठकपछि सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि डा.केसीको मागमा सकरात्मक देखिनुभयो । डा.केसीसँग आजै सरकारका तर्फबाट वार्ता भएको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो ।
बुधवार, आश्विन २१ २०७७०९:३७:५४
# केपी शर्मा ओली # डा गोबिन्द केसी